トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Pa parlour ukutyala izixhobo neyilahleko kunzima ekunciphiseni ukuba umthengi
isihloko, kodwa kukho utyalo-mali kwenye yezo akhawunti ubunzima enkulu kwamaxabiso Pachinkoya. Ekubeni uphuma kungenzeka ukuba akanako reduced intlawulo yabathengi apha kakhulu ukuba ukusebenzisa imali, kodwa kufuneka uhlole njengenye indicators.
kutshanje, kufuneka inani elandayo, nesendlu pa stylish kakhulu. Imbonakalo, Kakade ke, kwada inxalenye omhle ngezihombo kunye yangasese, nesendlu pa akukho ngaphantsi ankcitho imali. Kukho kwakhona kwiivenkile nazo wanamathela kwezinye isakhiwo. Umzekelo, iiyunifom umqeshwa, iipowusta, nokunye Kukho ezininzi izitulo zilungiswe phezulu kwaye ezantsi ukuphakama. Ngokwembono
icala pa parlour, ukuba kukho nokuba le nkonzo ukuba abathengi wenjongo, ezifana ezifana imbonakalo ukufumana abathengi ababhinqileyo, kungenzeka ukuba utyalo-mali ukutsala abathengi njongo. A ngenxa utyalo-mali, ukuba phezulu iyasebenza, ngenxa yokuba lo inguqulelo ethi nayo phezulu intengiso, utyalo-mali kuya kwandula ke kuthiwe impumelelo enkulu.
ke, ukuba intengiso ukunyuka, kuba inguqulelo ngokwaneleyo kwanciphisa banokuba kwi intlawulo umthengi, uya kuba into yokuba pa parlour ukushiya nangumntu onomlaza, kuya kuba ngaphandle bathi zombini. Yiba kwi isixa esithile kotyalo-mali kulwakhiwo, pa nesendlu ukuba ibhola ngaphandle kukho ukubaleka kwi-avareji, akukho ingxaki, nesendlu pa, nto leyo ukunciphisa iingeniso.
Kodwa ke ingxaki asingomzekelo, ngelixa iindleko na kakhulu xa utyalo-mali lwenkunzi, i elibe pa ukuba sebenziso alwenziwanga sokwandisa intengiso akavele. Kwimeko enjalo, elibe pa, isixa esilingana utyalo-mali, iya kuba yinto recovery extra kuyimfuneko okanye Kuyinto. Ekubeni kwakhona iindleko kunzima yinguqulelo, kwimeko enjalo, asinaso isizathu elingase Nante ukuncitshiswa kubaxumi.
kwakhona elihle, ezifana yimbonakalo, nesendlu pa kwaye uzive ukungalingani kakhulu kwi intlawulo, ukuba usebenzo ye elibe pa oko izinzile, nceda khangela Khumbula ukuba kukho ithuba ukwehla kunzima. Ukongeza, isakhiwo nayo bubudala, nkqu ukuba amdaka-ivenkile uhombiso kunye yangasese, kukho abaninzi lixesha pa parlour. Kwimeko ukuya egumbini fans kwakunye nezo kwakufuneka inkalipho encinane ukungena, uye pa nakwesiphi na amatyala amaninzi ixesha elide-bume. Ngaphandle sokudala
inkangeleko, njl, pa shop ukuba umdlalo kwi intlawulo, mhlawumbi hayi ukuba utyalo-mali encinci. Ngaphezu nesendlu pa icocekile, okanye intlawulo kwakhona okulungileyo, ndicinga ukuba kwiimeko ezininzi Tyhila kakuhle. igcina pa ukuchitha imali naye utyalo mali ezifana, kusenokwenzeka ukuba kwakhona kwimali intlawulo ngaphandle iinzipho ukulungiswa.
Ngokufutshane, wobeka phi na ke le intlawulo, ukuba isikhonkwane uhlengahlengiso eninzi ilungile, uze ujonge ukusebenza le meko, ezo zinto zontathu, ungenza ndiyaqonda ukwehla kusenokwenzeka ukuba imeko siwenze kunye notyalo-mali . Kwaye intle ke kunye nokungcola imbonakalo, ndingaphumi ngaphandle kukuba akukho kunjalo kungekho buhlobo.
ufuna capital investment ukubona kakhulu le ndawo ukuba okanye hayi ukulungisa abo ezaphukileyo. Njl eyaphuke yangasese Toka yaphulwe umoya, kubonakala nako ukulungisa yinxalenye oluqaphelekayo yakho, akukho nto kukho isizathu elingase ukuncipha Nante. Njengoko iintsalela ezaphukileyo kule ndawo kudla, elibe pa, ndicinga ukuba akukho nto yokudlala.
Ndicinga ukuba xa kunokwenzeka ukuba la mabali Yebo ireferensi, kodwa zithembeke kakhulu kunokuba khangela into data ngokungakhethe ngaphandle kokuba hliswa ezifana ivenkile uhombiso. Esi sakhiwo kwakhona indawo yakrazukileyo, ekwabizwa ngokuba lingcolile-ivenkile uhombiso kunye yangasese, kukho abaninzi lixesha pa parlour. Kwimeko ukuya egumbini fans kwakunye nezo kwakufuneka inkalipho encinane ukungena, uye pa nakwesiphi na amatyala amaninzi ixesha elide-bume. Ngaphandle sokudala
Ndicinga ukuba xa kunokwenzeka ukuba la mabali Yebo ireferensi, kodwa zithembeke kakhulu kunokuba khangela into data ngokungakhethe ngaphandle kokuba hliswa ezifana ivenkile uhombiso. Re omnye kuphela uhlengahlengiso iinzipho ilungile, uze ujonge ukusebenza le meko, ezintathu oku, ungenza ndiyaqonda ukuba ukwehla ukuba imeko siwenze kunye utyalo-mali yenziwe. Kwaye intle ke kunye nokungcola imbonakalo, ndingaphumi ngaphandle kukuba akukho kunjalo kungekho buhlobo.
Ndicinga ukuba xa kunokwenzeka ukuba la mabali Yebo ireferensi, kodwa zithembeke kakhulu kunokuba khangela into data ngokungakhethe ngaphandle kokuba hliswa ezifana ivenkile uhombiso.